hwiricheya vashandisi vane zvipingamupinyi zvakawanda zvekukunda saka zvinoonekwa sevamiriri vechokwadi mumakwikwi akaita semarathoni nemitambo. Nehurombo, kwete ese vanoshandisa wiricheya vanokwanisa kukwikwidza mumarathoni kana mitambo nekuda kwe mamiriro epanyama kana akasarudzika mamiriro. Kune rimwe divi, vazhinji vanokwanisa kukwikwidza. Ivo kazhinji inofanirwa kudzidzisa zvakanyanya kwemaawa.
Kazhinji nguva avo vane hurema hwakanyanya vanowanzoida zvakanyanya uye vanove shasha dzechokwadi muziso reruzhinji. Kuva nemotokari yekumuka kuti udzidzise zvakaoma zuva nezuva kunogona kunetsa kunyanya kana vanhu vachiratidza kusahadzika kwavo kubudirira. Kunzwa kwekuita kunogutsa kupfuura iko kuiswa pachako.
hwiricheya Marathon akagadzirwa kubvumira avo vasina iyo kutadza kumhanya nhangemutange kuwana iyo kugutsikana kwekugona kuburikidza nemakwikwi. Marathon inowanzoitirwa mumaguta makuru munosangana vanhu vazhinji. Maguta mazhinji muUnited States anotambira wiricheya marathoni ekuti vanhu vakwikwidze kana kungo tsigira chinangwa. Vazhinji vanoda kukwikwidza vamwe vachida pfungwa yekuita uye vazhinji vanofarira kufambidzana nevazhinji kuve chikamu chechikonzero.
Kuti uwane makwikwi mu wheelchair marathon, mumwe anofanirwa kunge aine hutano hwakanaka kuti ave nechokwadi chekuchengeteka kwemunhu. Hutano hwakanaka hunotsanangurwa semoyo une hutano kana hapana mamiriro izvo zvinodzivirira kurovedza zvakanyanya. Kudzidziswa kunofanirwa kumamaroni nekuti kazhinji kacho kukwikwidza kure kure. Vamwe vangangoda kurega kana pasina kudzidziswa kwakaitwa zuva remakwikwi risati rasvika.
Kuva nekodzero midziyo kurovedza kwakakosha kunyanya kana uchikwikwidza nevatambi vanokwikwidza. Kodzero midziyo inobvumira munhu wacho kuti aite iyo kurovedza muviri kwakakodzera kuva anokurumidza uye mukwikwidzi wechokwadi munhangemutange.
mhando mavhiripu yemarathoni
Rudzi of mavhiripu used in wiricheya marathons yakasiyana zvakanyanya kana ichienzaniswa neyakajairwa wiricheya yemawoko. Mhando idzi mavhiripu inogona kusvika pakakwirira uye ari dhizaini kuti vakwikwidzi vave neakanakisa kuenzanisa kunogona uye kutonga uchimhanya. Iwo ane matatu mavhiri maviri anotsigira chigaro uye chechitatu chakaiswa kumberi nemubato kubvumira mushandisi ku mauver kwavanoda kuenda pavanenge vachishandisa.
Vanhu mukati mavhiripu anogona uye akawanzo kukwikwidza mumamarathoni, kungave mumarathon yakanangana ne wiricheya mushandisi kana kwete.
Verenga zvakawanda pamusoro vanoshandisa wiricheya uye marathoni nekudzvanya zvinongedzo pazasi:
Ndeapi mamwe maekisesaizi kune vanhu vane mawiricheya?